Aqri: Wararkii u dambeeyey shirka ka furmaya Garoowe - Caasimada Online
Home Warar Aqri: Wararkii u dambeeyey shirka ka furmaya Garoowe
Aqri: Wararkii u dambeeyey shirka ka furmaya Garoowe
Garoowe (Caasimada Online) – Dib u dhac ayaa markale ku yimid shirka madasha aragti wadaaga ee uu soo qaban qaabiyey Machadka Hiratage, kaas oo lagu waday inuu saaka ka furmo gudaha magaalada Garoowe ee caasimada dowlad goboleedka Puntland.
Wararka ayaa sheegaya in dib u dhacan oo noqonaya kii labaad ay sababeen arrimo farsamo, sida ay Caasimada Online u sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay
Shirka oo ka dhacaya xarunta Jaamacadda PSU ee magaalada Garoowe ayaa la qorsheynayaa in galabta ama beri uu si rasmi ah uga billowdo halkaasi.
Madasha aragti wadaagga oo qaadan doonto saddex cisho ayaa waxaa sanadkan diirada lagu saarayaa sidee 2025 looga bixi karaa Kumeel gaarnimada iska socota?, si dalka u helo Dastuur dhameystiran, doorasho qof iyo cod iyo nidaam federaal oo shaqeynaya.
Ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale adkeeyey ammaanka magaalada Garoowe oo la ciir-ciireysa mas’uuliyiin kala duwan oo ka qeyb-galeysa shirkaasi.
Waa sanadkii ugu horreeyey madasha aragti wadaagga sanadlaha ah ee Machadka Hiratage lagu qabanayo gudaha dalka, iyada oo markii hore lagu qaban jiray Jabuuti.